Akụkọ - nke bụ diamond dị oke ọnụ n’ụwa? Lelee akụ nke kere akụkọ ntolite
Gbanye na RHINESTONES
Kedu diamond dị oke ọnụ n'ụwa? Lelee akụ nke kere akụkọ ntolite
Kedu ihe diamond dị oke ọnụ n'ụwa? Mgbe ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta uru ọ bara, ikekwe anyị nwere ike ịlele ọnụahịa nke mgbaaka diamond site na diamond dị oke ọnụ na nke kachasị ọnụ ahịa n'akụkọ ihe mere eme. Ihe ndị a mebere mgbaaka diamond dị n’akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ahịa ahụ. Obi mara mma ma na-egbu egbu!
Okpuru diamond ise kacha ọnụ ahịa n’akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ahịa
Nke a Graff odo diamond mgbanaka, na-eri 100.09 carats, enweghị ike mechie n'ihi obere ọnụ. Ka oge na-aga, na ụlọ ahịa ụlọ ahịa nke Sotheby na-ekwupụta re-auction nke diamonds, ihe kachasị mkpa bụ ọnụahịa ikpeazụ nke $ 16.3 nde na May 2014. Nkwekọrịta ahụ, dị ka Sotheby si kwuo, kpughere na ọnụahịa ahụ emebiworị ndekọ ụwa gara aga nke 14 nde US dollar, na ụlọ ahịa ahụ kwenyere na ọnụahịa ahụ "dị mma", mgbe nke a gasịrị, ọnụahịa atụmatụ nke diamond na 15-20-25 nde US dollar n'etiti.
Emere oge opupu ihe ubi nke 2017 na mgbede nke 4 na Honglọ Mgbakọ na hiblọ Ahịa nke Hong Kong. Nke a na-atụ anya nke ukwuu “Pink Star” - na-eri 59,60 carats nke ekara ekara ekara-acha odo odo na-enweghị ntụpọ pink maka ihe dị ka nde dọla 553 Hong Kong (Ihe ederede Editor: ihe ruru 490 nde RMB azụmahịa azụmaahịa, nke setịpụrụ ndekọ ọhụrụ maka ire ahịa diamonds na ụwa.
Christie gbara ahịa na-acha anụnụ anụnụ 14.62-carat na-acha anụnụ anụnụ maka $ 57.6 nde na Geneva, Switzerland. A na-akpọ diamond mara mma na-acha anụnụ anụnụ nke onye zụrụ aha ya na-akpọ Oppenheimer Blue. Ọnụ ego tupu ọnụahịa ahụ eme atụmatụ na 3800. ~ $ 45 nde US, bụ mkpuru kachasị nke ụdị a isonye na auction.
Ka ọnwa nke iri na abụọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri na abụọ n’afọ 2013, a na-ere diamonds kacha nnukwu oroma n’ime mba US $ 31.59, na-atọbe ndeko maka ọnụ ahịa ahịa ola diamond ndị yiri ya. Ejiri American Gemological Institute nke a dị mmanụ oroma dị ka ogo dị elu na agba ya bụ oroma dị ọcha. A na-akpọkwa ụdị diamond a "ọkụ ọkụ" ọ na-esighi ike ịpụta na mgbu. Enwere ike ikwu na a na-amata diamond oroma nke kachasị n'ụdị ya.
N'ọnwa Ọktọba 2013, rere ere ọcha elliptical fender-acha Type IIa diamond, na-eri 118.28 carats, mechara rere $ 30.6 nde (HK $ 212 nde) na "Hong Kong Sotheby's Magnificent Jewelry and Jade Jewelry Auction". Enwere ike ịsị na ọ mepụtara ndekọ auction maka ụwa nke diamond ọcha, yana ọ ghọwokwa otu diamond dị oke ọnụ na oke ọnụ ahịa n’akụkọ ihe mere eme. Nke a 118 carat ọcha diamond na-machined si 299 carats nke diamond akụrụngwa mined na South Africa na 2011. Ọ na-akọ na-azụ nke a diamond nwekwara ike inwe aha ya ikike.
Onu ahia ndi mmadu ato na akuko banyere akuko
Olu nke Maharani nke Baroda, India
Oge auction: 1974
Ọ bụ ikwubiga okwu ókè ịsị na ọ bụ ihe okike kachasị dị egwu n'akụkọ ihe mere eme. Emeralds Colombian nke nwere ube iri na atọ na ngụkọta nke 154 carats na-akwụsịtụ na etiti ola diamond n'ụdị lotus, ma mee ya ọtụtụ emeralds na diamonds. . Ihe kachasị ịtụnanya bụ na a na - ewere nkume ndị a dara site na okpueze Grand Duke nke Vadodda. Maharani nke Baroda, nke amara dika Duchess nke Windsor na India, nwere ochicho nke ihe okike. E nwere nanị narị atọ iberibe onwe onye jewelery collection. Ọbụna ụfọdụ n'ime ha laghachiri n'oge Mughal.
Achicha nke Duchess nke Windsor
Oge auction: 1987
Van Cleef & Arpels, ebe emere omenala maka Nwanyị Virgo na Varonda, India, ya na Cartier rụkọkwara ọrụ ịhazi ọtụtụ ọla maka Duchess nke Windsor. A makwaara nke a dịka nchịkọta ọla kachasị ọnụ ahịa nke narị afọ nke 20. Mgbe Duchess nke Windsor nwụsịrị, e beere ihe nchịkọta ego ya karịrị nde $ 50. Na 1940 cartier choputara uhie, acha anụnụ anụnụ na ahihia ndu na citrine na dayamọnd maka ọmarịcha flamingo a. Eze Edward VIII ji mmesapụ aka nye nwanyị ọ hụrụ n'anya. Agbanyeghị na ọ nwere olile anya iwepu akwa ahụ mgbe Duchess nwụsịrị, ọ kwadoghị ogologo oge. Ọnụ ahịa brooch a ka na-arị elu, ọ dịkwa okpukpu asaa karịa ihe ndị a na-atụ anya ya bụ nde US 7!
Olu Olu Salimah Aga Khan
Oge auction: 2004
Ọ bụghị naanị ọmarịcha Duchess nke Windsor ka ọnụahịa dị elu tozuru oke. Mgbe Sally CroCKer-Poole ghọrọ ada eze na 1969, ọ chịkọtara ọtụtụ ọla dị okomoko. A na-ere ahịa ọla ndị a mgbe ọ gbara alụkwaghịm na 1995. Ihe ndị a gụnyere ọla olu Boucheron, ọla olu ọla edo nke Cleou & Eble na ọla edo ndị nwere ụdị obi, ndị a na-ere ha niile na oke ọnụ ahịa, nke na-eme ka ọnụ ahịa Duchess nke Windsor ghara ịdị. okushon.
Olu Maria Callas
Maria Callas, ama ama na "Chi nwanyị" ya bụ onye na-agụ egwu opera. Àgwà ya siri ike na akụkọ ịhụnanya jọgburu onwe ya bụ ihe ndị mmadụ na-atụle mgbe niile. Ọ bụ ezigbo chi nwanyị, na-etinye pearl na diamond mgbe niile, ebe ọ bụla ọ na-aga iji dọta uche ndị mmadụ. Nchịkọta ọla Maria Callas kachasị dị oke ọnụ ahịa gụnyere brooch nke pink diamonds zụtara na 1967, bụ nke ndị ahịa bidoro na Nọvemba 2004 mgbe ọ nwụsịrị ọtụtụ afọ gara aga. Mkpokọta ọnụ ahịa ọla ahịa ruru nde dollar 1.86.
Princess Margaret okpueze
Oge Auction: 2006
Agaghị echefu auction ọla nwanyị Princess Margaret n'ụzọ dị mfe, ọkachasị mgbe otu narị afọ gachara na-ere ahịa ọla edo nke Queen Victoria na 1901. N'ezie, nchịkọta ndị eze 800 nke Princess Margaret bụkwa 2006 Chọta ahịa ahụ. Princess Margaret na-adịkarị mma ma na-adọrọ adọrọ tupu ọnwụ ya, ọtụtụ ọla na-eto eto iji nweta ihe ùgwù nke ịbanye n'ezinụlọ ndị eze. Gụnyere ụfọdụ nnweta nke Faberge na Queen Mary, na okpueze Poltimore a ma ama nke o yi na agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ nke 1960, amụrụ ya dịka 1870, otu narị afọ gara aga.
Elizabeth Taylor's Ring Ring
Oge Auction: 2011
Onweghi ọrịre ọchọmma nwere ike isonye na okomoko Elizabeth Taylor. A na-ere ahịa nchịkọta ọla ya mgbe ọ gafesịrị ụwa niile otu ọnwa. Ọ bụrụ na anyị chere na ire ere gara aga nke nde dollar 50 abụrụla ihe ịtụnanya iji gbaa aka ọjọọ, mgbe ahụ amaghị ihe iji kọwaa dollar US 137,2! Mkpokọta okike gụnyere onye na-eme ihe nkiri 1968 bụ Richard Burton (Richard Burton nyere ya mgbanaka diamond, ngụkọta nke carats 33.19. Nke a bụ naanị obere akụkụ ya, yana Cartier - emebe pearl ruby ​​Peregrina, olu Mike Todd, olu olu Taj diamond , na ihe ọzọ Bulgari na-acha uhie uhie emerald nke Richard Burton nyere.
Ulo akwukwo Lily Safra
Oge Auction: 2012
N’ezie, ahịa ahịa ọla Lily Safra mere na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ihe ohia a na-ere ahịa gụnyere rubi na ọmarịcha brooch nke JAR Paris mere, na-atụle ihe dịka 173.09 carats. Akụkụ kachasị mma nke usoro ntanye bụ na enyere ego niile aka na ọrụ ebere, n'ihi na Lily Safra abụghị naanị onye ama ama kamakwa ọ na-enyere ndị mmadụ aka. Mgbe alụm di na nwunye anọ gachara, nchịkọta ọla ya nwere ihe ruru nde $ 1.2, nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime ndị kasị baa ọgaranya n'ụwa.
Ọla ntị nke Gina Lollobrigida
Oge Auction: 2013
Gina Lollobrigida abụghị naanị onye omeebe Italiantali. Ọ bụkwa onye odeakụkọ na onye na-ese ihe. Ọ bụkwa onye ama ama na European omee na 1950s na 1960. N'oge ahụ, ọ bụ naanị ihe ngosi sexy. Na Mee 2013, a na-ere ahịa nchịkọta ọla ya ma kpata mmetụ obi, ọkachasị maka ọla ntị Pierre Boucherin Diamond Emerald nke emepụtara na 1964.
Mgbaaka nke Hélène Rochas
2013 bụ n'ezie oge kachasị elu nke ọrịre ọla mma, otu n'ime ihe ndị pụtara ìhè bụ mkpokọta ọla Rosa, gụnyere ọla edo ọla edo nke Nid d'Abeille René Boivin na-acha ọbara ọbara, sapphire, na diamonds. N'otu echiche, o mekwara ka ohere dịrị n'etiti ndị na-achịkọta ihe na ndị Paris dị elu ma nwee obere ahụmahụ.
Post oge: Sep-20-2018